Niverina indray i Durarara miaraka amin'ny vanim-potoana faha-3 misesy: vanim-potoana faha-3 Durarara - Fialam-Boly
Niverina indray i Durarara miaraka amin'ny vanim-potoana faha-3 misesy: vanim-potoana faha-3 Durarara
Storyline | Vanim-potoana faha-3
Fiverenana amin'ny vanim-potoana teo aloha | Vanim-potoana 1 & 2
Daty famoahana | tranofiara
Naoty & Hevitra
Oh, dia tonga teo amin'ny toerana mety ianao! Manana ny tsara indrindra amin'ny fampahalalana rehetra tokony ho fantatrao izahay aDurararampankafy. Tena mampientam-po tokoa ny mijery ireo mpilalao tianao indrindra fa amin'ny vanim-potoana vaovao sy ny tantara vaovao.
Raha fantatrao, ny DurararaNy andian-tantara an-tsary dia mifototra amin'ireo tantara an-tsary Light avy any Japana izay nosoratana sy nasehon'iRyohgo NaritaSYSuzuhito Yasudatsirairay avy.
taty aoriana Takahiro Omoridia nitarika azy ho amin'ny anime. SYny crédit famokarana dia mandeha amin'nyNy fototry ny atidoha, trano fanaovana sarimiaina japoney.Tsy mampientam-po ve izany? Fantatro tsara ny tantara an-tsary sy ny tarehin-tsoratra mampientanentana anao bebe kokoa.
Noho izany, andeha isika handinika ny antsipirian'ny fahaliananao momba ny ho avyDurarara,hatsikana, hetsika, mampientam-po ary aventure mifangaro andian-tantara anime vanim-potoana 3.
Ny anime dia namboarina tamin'ny andian-tantara araka ny efa nolazaiko. Fantatrao vemisy totalin'ny boky 13 amin'ny boky maivana izay nampifanarahana ity sarimiaina ity?
Ary izany rehetra izany dia namely ny mpamaky. Tantara tena misy fiantraikany izy ireo ary noho izany dia namboarina ho anime miaraka amin'ny vanim-potoana roa misesy ary ny fahatelo taorian'ny namoahan'ny banga izao.
Noho izany, izay azonao antenaina amin'ny vanim-potoana 3 dia vakio fotsiny mba hahafantarana bebe kokoa!
Durararamiorina ao an-tanànan'iIkebukuro,Japanadia ny tantara momba ny tovolahy iray antsoina hoeMikado Ryugamine.Nisesisesy ny tranga niseho teny amin’ny araben’nyIkebukuro.
Aiza ny naman'ny zazalahy kelyMissaomi Kidaefa nampitandrina azy mba hitandrina nyShizuo Heiwajima,Izaya Orihara, aryThe Dollars gang. Saingy mandeha tsy nampoizina ny zava-drehetra ary misy toe-javatra mampikorontana.
Ary nyBlack Rider, mpitaingina bisikileta tsy manan-doha mitady ny lohany, mampihoron-koditra kokoa ny tanànan'iIkebukuro. Ireo rehetra ireo dia manomboka mifandrayMikadoary misesisesy ny trangan-javatra miseho, ny ratsy sy ny tsara! SYvanim-potoana 2 mitondra fiadanana sy fahasambarana ho an'ny tanànan'iIkebukuro.
Toy izany ny DurararaNy tantara dia mitohy manambara ny olona tsirairay isaky ny fizarana. Ity fananganana ity dia mampiseho mazava fa ny vanim-potoana 3 dia ho mahagaga kokoa feno fanantenana ambony avy aminareo rehetra!
Reraka tamin'ny fiainany mandreraka Mikado Ryugamine nifindra tany Ikebukuro ary teo no nisehoan'ireo hetsika lehibe.Dia izay no fandehan'ilay tantara efa voaresaka!
Ny vanim-potoana 1 sy 2 dia mandrisika ny fiainan'ny olona samihafa izay tsy mitovy amin'ny vahoaka mahazatra. Samy misy fahasamihafana kely eo amin'ny tantara sy ny toetran'ireo vanim-potoana roa ireo. Fa mitondra fitantarana mampiala voly.
Ny bika aman'endriny sy ny loko sy ny fiaviana nohatsaraina tamin'ny vanim-potoana 1 ka hatramin'ny 2 dia nisy fiantraikany teo amin'ireo mpijery toa ahy sy ianao.
Izany dia mitondra fiandrasana ambony amin'ny vanim-potoana 3 izay mbola eo an-dalam-pandrosoana.Ny vanim-potoana 1 dia natao voalohany tamin'ny Janoary 2010 ary ny vanim-potoana 2 tamin'ny Janoary 2015ary tonga ny fotoana ho an'ny vanim-potoana faha-3.
Ny clips sy trailers dia zavatra tsy tokony ho diso fanantenana. Eto ambany ianao dia hahita ny trailer manokana an'nyDurarara. Hanome anao fahatsapana mahagaga momba nyDurararaandiany anime.
Mbola tsy misy famoahana ofisialy avy amin'ny mpanamboatra anime fa azonao jerena ny trailer sy clips amin'ny vanim-potoana 1 sy 2.
Ny vanim-potoana faha-3 dia antenaina hivoaka amin'ny 2021fa tsy misy fampandrenesana ofisialy avy amin'nyTakahiro Omorina ny ekipan'ny mpanamboatra anime.
Durarara saison 1nahazo 7.9 amin'ny 10 amin'ny mari-pahaizana IMDb, raha Durarara saison 2nahazo naoty IMDb 7.8 amin'ny 10. Ary ireo naoty ireo dia nataon'ny mpijery maherin'ny 6.7K ho an'ny vanim-potoana 1 ary mpijery 1.7K ho an'ny vanim-potoana 2.
Izany no mahatonga ny vanim-potoana 1 sy ny vanim-potoana 2 amin'nyDurararaandian-dahatsoratra mendrika hojerena anime. Izany koa dia manazava fa ny vanim-potoana 1 dia nanangona lazan'ny vanim-potoana 2.
Ho an'ny fizaran-taona 3 dia tsy azo vinaniana satria mbola tsy tonga ny famoahana anime. Manantena ny famoahana haingana izahay fa tsy mbola fantatra ny daty marina. Andrasan’ny mpankafy rehetra ny fampahafantarana ofisialy.
Satria ny vanim-potoana 1 sy 2 no tianao indrindra dia miandry ny vanim-potoana 3 ihany koa ianao. Faly sy faly mihitsy aza aho noho ny fahatongavany.
Mandritra izany fotoana izany raha tsy nahita ny vanim-potoana 1 sy 2 ianao dia mandehana manomboka, jereo! Ianao dia afakajereo nyDurararaandiany anime ho an'ny vanim-potoana 1 sy 2 amin'nyAmazon Prime VideoSYTranonkala ofisialin'i Hulu miaraka amin'ny famandrihana.
Ary eto ambany dia hahita ny boaty fanehoan-kevitra ianao. Zarao aminay ny hevitrao sy ny hevitrao ary ny fomba nitiavanao ny lahatsoratray.
Raha tianao ilay lahatsoratra dia mametraha hevitra ary ampahafantaro anay. Mifandraisa aminay hatrany mba hahazoana ny vaovao farany momba nyDurararaandiany anime.
Famoahana Tsurezure Children Season 2: maty ve ity andiany ity?
Great Pretender Season 3: Daty famoahana: Fantaro hoe rahoviana no havoaka ny andiany!
ny fomba hitodihana manodidina ny sakana youtube
kaody volamena mivantana xbox maimaim-poana tsy misy fanadihadiana na fampidinana na mpamokatra herinaratra
sarimihetsika vaovao hijerena maimaimpoana
mila mijery fandaharana amin'ny fahitalavitra
misy disney miampy fitsarana maimaimpoana
ahoana ny fomba hampiasana ny youtube amin'ny fahitalavitra mahira-tsaina